Fran Lebowitz သည် Vanity Fair အတွက်စာရေးပါသလား။ - အကောင်းဆုံးအဖြေများ
အဓိက > အကောင်းဆုံးအဖြေများ > Vanity fair fran lebowitz - မေးခွန်းများအတွက်ရိုးရှင်းသောအဖြေများ
Vanity fair fran lebowitz - မေးခွန်းများအတွက်ရိုးရှင်းသောအဖြေများ
Fran Lebowitz သည် Vanity Fair အတွက်စာရေးပါသလား။
သူမလုပ်တယ်နေတုန်းပဲရေးသတင်းစာဆရာများ၊Lebowitzအယ်ဒီတာအဖြစ်ရံဖန်ရံခါဆောင်းပါးရှင်အဖြစ်အလုပ်ခန့်ခဲ့သည်Vanity Fair၁၉၉၇ ခုနှစ်မှစ၍ သူမသည်လူသိရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခြင်း၊Lebowitzသူမ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်စတိုင်ကိုသိရန်လာကြသူပိုမိုကျယ်ပြန်ပရိသတ်ကိုရောက်ရှိခဲ့သည်။
စာအုပ်ကိုဇောက်ထိုးလှန်ပစ်လိုက်သည်။ သတိထားမိလိုက်သည်၊ ပထမဆုံးသင်ပြပွဲတွင်အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ဖူးပြီးနယူးယော့ခ်ျတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းအမြဲတမ်းညည်းညူနေသည်။ ယနေ့မန်ဟက်တန်လမ်းများပေါ်တွင်လျှောက်လှမ်းနေသည့်ယနေ့ခရီးသွား of ည့်သည်များ၏ခရီးသွားလာမှုအပေါ်သင်ညည်းညူသည်။ မင်းရဲ့ပက်ထရစ်နေ့အတွက်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာနေ့တစ်နေ့မဖြစ်နိုင်ဘူးယနေ့ခေတ်မှာမပျော်တဲ့ခရီးသွား is ည့်သည်တွေရဲ့နေ့ရက်များသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပထမ ဦး ဆုံးအတိတ်တွင်ဤချီတက်ပွဲကိုပြုလုပ်ရန်wasရိယာတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ အိုင်ယာလန်များစွာနေထိုင်ခဲ့သည့်နေရာတွင်သူတို့နေထိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သူတို့ဒီမှာလာခဲ့တာ၊ သူတို့ဒီမှာနေထိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့နေရာအတွက်ချီတက်ပွဲအတွက်ရောက်လာကြတာ။ ဒီနေရာကိုသူတို့မလာသင့်ဘူး။ သူတို့နေထိုင်တဲ့ Long Island မှာရှိသင့်တာပေါ့။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီမှာလာမယ့်အစားဟုတ်တယ်။ ငါ့အဆောက်အ ဦး ရှေ့မှာငါအားလုံးငါ့အဆောက်အ ဦး အပြင်ဘက်သင့်ရဲ့အဆောက်အ ဦး အပြင်ဘက်ဖြစ်ကြသည် yeah ငါသူတို့သင်၌အာရုံစူးစိုက်ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိ, ယခုသူတို့သည်သင့်ကိုရှာဖွေလာကြလိမ့်မည်, ယခုသင်ရှိနေကြသည် s ကိုသူတို့ကအမြဲငါ့ကိုရှာခြင်းငှါလာကြဟုဆိုသည် ခင်ဗျားအတွက်စာရေးဆရာဖြစ်တာမင်းအတွက်စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာငါသိတယ် Vanityfair နှင့်ယနေ့ vanity fair သည်သင်အမြဲတမ်းအကြီးမြတ်ဆုံးအော်စကာပါတီဖြစ်မှန်းမသိပါ၊ သင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း Vanityfair အော်စကာပါတီသို့သွားသောသင်သည်ဤမဂ္ဂဇင်းအတွက်စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သင် yeshuh သို့ရောက်ရန်ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မင်းကိုငါခေါ်မယ်နင့်ကိုငါလုံးဝယူသွားမှာပါ။ အခုဒီပါတီပဲ။ ငါအခုလိုချင်ရင်ငါထွက်သွားနိုင်ပြီ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအခုလာရမှာပါ၊ ဟုတ်ပြီ၊ ဒီပါတီအကြောင်းပြောပြပါ၊ ငါဘယ်တော့မှမသွားခဲ့ဘူး၊ ပါတီပွဲတွေကိုငါလုံးဝမသွားဘူး၊ နယူးယောက်လိုခပ်ဆင်ဆင်ပဲ။ သူတို့အားလုံးဟာကြယ်ပွင့်တွေ၊ ရုပ်ရှင်ကြယ်ပွင့်တွေအားလုံးစိမ်းလန်းစိုပြေတယ်၊ ​​စိမ်းနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်အများအားဖြင့်မနာလိုကြတယ်၊ ဒါကငါတို့အတွက်ဒါဟာရုပ်ရှင်ကြယ်ပွင့်ရဲ့ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ရုပ်ရှင်ကြယ်ပွင့်တွေရခဲ့ကြတဲ့ကံကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုဟုတ်ကဲ့ပြောသူကိုမုန်းတီးသူတွေ၊ မင်းအကယ်ဒမီကိုသွားတဲ့အခါမင်းအမြဲတမ်းမခံစားရဘူးလား ဆုများနှင့်လူတစ် ဦး အနိုင်ရရှိပြီးကင်မရာသည်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်သင်မမြင်လိုသူကိုဓာတ်ပုံရိုက်နေသည် ၊ သင်သိတဲ့သူကပြုံးနေသည်။ မင်းရှုံးနိမ့်သူတွေကိုမြင်တွေ့ချင်တာကြာပြီ၊ သူတို့နဲ့အတူအချိန်အကြာကြီးနေချင်တယ်၊ သူတို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကိုကြည့်ပြီးလူတွေ၊ မြင်ချင်တဲ့ပရိသတ်တွေမြင်ချင်တဲ့အရာငါကင်မရာနောက်လိုက်ချင်တာ။ လာမယ့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲအိမ်မှာရှိနေတဲ့သူဟာအိမ်ကိုပြပြီးသူတို့ဖုန်းကိုနားထောင်ပြီးသူတို့ညည်းညူနေတုန်းမှာကြားပါ။ အဲဒီမှာရှိနေတဲ့ဆိတ်သငယ်၊ ငါ့နာမည်၊ သူ့နာမည်၊ ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ကလေးသရုပ်ဆောင်ကဟုတ်တယ် Haley Joel blah blah blahculkin တကယ်လို့မင်းကရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရင် umieဖြစ်မယ်။ ရှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးလေးတစ်ယောက်နဲ့ယှဉ်ပြိုင်ရတာရှက်စရာမဟုတ်တော့ဘူး။ ဆိုလိုတာကဆုတွေအားလုံးကအရမ်းမိုက်တာပဲ၊ မထိုက်တန်ဘူးလို့ငါထင်တယ်၊ တစ်ခုရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါတစ်ခုရလိုက်တာနဲ့သူတို့တစ်တွေရတယ်။ သူတို့ကငါ့ထင်မြင်ချက်မှန်ကန်မှုရှိသလားငါသိမှာပဲ။ မင်းသိတာငါသိတယ်ငါတကယ်ဘယ်သူလဲငါမသိဘူးအခြားသူအပေါ်ထပ်မှာလဲဒါပေမယ့် Jack Nicholson ဒါမှမဟုတ်ရှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးလေးမှန်တယ်၊ နှစ်ပေါင်းများစွာရှစ်နှစ်သားလေးကမှန်တယ်၊ မင်းကသူတို့နဲ့လူကြီးဆီကဘယ်တော့မှမကြားဘူးဆိုရင်ငါအရမ်းအံ့သြသွားတယ်၊ သူတို့ကဆိကိုအော်စကာပေးတာ၊ သူကစားချင်တာလား၊ ချောကလက်လို့ထင်ရင် ၅၅ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ် ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းကလေးငယ်ဟာဒီဟာကသူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အလုပ်အကိုင်အစပဲလို့အမြဲတမ်းထင်နေတယ်၊ ​​အဆုံးကငါတို့အချိန်အကြာကြီးအရှက်ရဆုံးပြပွဲမဟုတ်ဘဲငါတို့လက်ထဲမှာသေနတ်သမားအသေကောင်အနည်းငယ်ရှိနေပြီ၊ အနိုင်ရတဲ့ကလေးတွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမင်းကဆုပေးပွဲအခမ်းအနားအပြီးမှာသူတို့ကိုတက်လိုက်တဲ့ကားက Betty Ford ဆီကိုတည့်တည့်ရောက်သွားတယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်မင်းတို့ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ငါတို့ပရိသတ်တွေအံ့အားသင့်သွားတာကိုမယုံနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။ ရှစ်နှစ်ရှိပါပြီ။ သူကတကယ့်ရှစ်နှစ်အရွယ်မဟုတ်ပါဘူး။ သူဟာမင်းသားရှစ်နှစ်ပုံဖော်ထားတဲ့သရုပ်ဆောင်သူပါ။ တကယ်တော့သူကိုယ်တိုင်ပါ။ ၄၈ နှစ်ပြည့်နေပြီ၊ ဖြစ်နိုင်မယ်၊ ဒါကဒါဝေးနှင့်အတူလာပါ။ အဆင်ပြေပါတယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်ငါကောင်းပါပြီဒါကောင်းပေမယ် fran leibowitzreaderit သည် St. Patrick's နေ့ပါ။ နေရာတိုင်းမှာမရရှိနိုင်ပါ။ အမျိုးသမီးများနှင့်လူကြီးလူကောင်းများ ထွက်၍ ဤစာအုပ်ကိုပြင်သစ်ဘာသာရွေးပါ။ ငါတို့နေတဲ့အိမ်နားမှာခဏနားပြီးအနားယူတော့မယ့် patrick's day မျိုး မထားခဲ့ပါနဲ့
Fran Lebowitz ကသူမရဲ့ပိုက်ဆံဘယ်လိုလုပ်သလဲ။
Celebrity Net Worth ၏အစီရင်ခံစာအရFran Lebowitz ရဲ့အသားတင်ရကျိုးနပ်ဟုတ်တယ်$4Million ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့် ၏အဓိကအပိုင်းအစသူမဝင်ငွေဟုတ်တယ်မှသူမစာအုပ်များနှင့်လူထုစကားပြောလှုပ်ရှားမှုများ။ သူမမှာလည်းရှိတယ်လုပ်တယ်အတိတ်တွင်တီဗီရှိုးအတွက်ပွဲ။ သူမသည်နယူးဂျာစီရှိ Morristown တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။
လာကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကြိုဆိုပါတယ်၊ ငါတို့နဲ့အတူအတူရှိနေတာဝမ်းသာပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာမင်းရဲ့သားသမီးတွေရဲ့စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအငြင်းပွားစရာတွေအကြောင်းအငြင်းပွားမှုအနည်းငယ်ကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားလို့ပါပဲ။ Panda ကျွမ်းကျင်သူအမြောက်အမြားအမ်၊ အဲဒီမှာ Panda ကျွမ်းကျင်သူအမြောက်အများထွက်ပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်သိလိုက်ရတဲ့အခါသင်အံ့သြမိမှာပါ၊ သူတို့ကပြtheနာကိုလက်ခံတယ်၊ ငါ pandas တွေကိုကျပန်းရွေးလိုက်တာနဲ့ပျော်စရာတိရစ္ဆာန်လို ကလေးတွေကိုဖရိုဖရဲဖြစ်စေတယ်၊ ​​ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ဆီမှာအကြောင်းပြချက်မရှိဘူး။ သဘာဝကမ္ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိပ်မသိဘူး၊ တရုတ်ကလာတာတောင်မှမသိဘူး၊ ပန်ဒါတွေကတရုတ်ကလာတာမဟုတ်ဘူး၊ ငါလည်းမသိဘူး၊ ငါသူတို့ကတရုတ်ကနေမသိဘူး၊ သူတို့ရှားတယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး၊ ဆိုလိုတာကတော့သင်ဟာ Greenwich မြက်ခင်းပြင်ကရှဥ့်များဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ပန်ဒါတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်၊ ​​ငါပန်ဒါနဲ့စဉ်းစားနေတယ်လို့အလွယ်တကူယုံကြည်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာ။ ငါ hardcover ထွက်လာသောအခါ w uh အက္ခရာများကိုစတင်ခဲ့တယ် ait, ဤပန်ဒါပညာရှင်များအရူးဘာတွေလဲ ငါဒီ pandies တွေကိုဘာလုပ်ခဲ့လဲ၊ ငါ pandai ကိုမှားယွင်းစွာကိုယ်စားပြုတယ်လို့ခံစားရရင်၊ ငါ pandas မှာပီဇာမစားဘူး၊ တကယ် pandas ကဝါးကိုစားတယ်၊ ၀ ါးပင်အနည်းငယ်သာရရှိကြသည်၊ အဆင်ပြေသည်။ ထို့ကြောင့်ပီဇာများစားသုံးသင့်ကြောင်းပန်ဒါမရှိသည့်အတွက်ပီဇာများကိုကျွန်ုပ်တို့ပို့သင့်သည်။ ထို pandas အကြောင်းတိတိကျကျပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်ကအမေရိကန်လူမျိုး၏သိုးမွှေးသည်သိုးမွှေးဖြစ်သည်။ နင်သိလား၊ ငါနင် Newsweek အတွက်ဆယ်ကျော်သက်တွေအကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးခဲ့တယ်။ ဘယ်မှာငါအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအကြံပေးသူတွေအကြောင်းကိုကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချတယ်၊ အသက် ၈၀ ခန့်အလုပ်အကိုင်အကြံပေးတွေဆီကကျွန်တော်ကြားရတယ်၊ ဒါကတကယ်ကိုထူထောင်ဖို့ညီမျှခြင်းတစ်ခုပဲလိုတယ်ထင်တယ်။ ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့မှာဘာမှမလိုအပ်ဘူးလို့စဉ်းစားတယ်၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတိုင်ပင်သူသန်း ၈၀ ရှိတယ်၊ တကယ်တမ်းအဲဒီအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအကြံပေးတွေရဲ့ကျောင်းသားတွေ၊ ဒုက္ခများစွာကြုံခဲ့ရတယ်၊ ကောင်းပြီ။ ဒါဆိုဘာလုပ်မှာလဲ ဆိုလိုတာကမင်းကိုနောက်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာယူတော့မယ်၊ မင်းဂရုမစိုက်တဲ့တိရစ္ဆာန်ကိုသုတေသနလုပ်မယ်၊ ငါမရှိ၊ ငါတကယ်ပန်ဒါပညာရှင်များကိုသာစော်ကားသည်၊ ငါ့ကျောကိုလှိမ့ ်၍ ပြေးသည်ဘာမှမရှိ၊ ငါတွေ့တဲ့ပန်ဒါကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကိုကျေနပ်နှစ်သိမ့်ရမယ်ငါညအချိန်မှာဘယ်လိုအိပ်ပျော်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူး။ အခုချိန်မှာတော့အိုကေတော့မသိသေးဘူးနော်ဝတ္ထုတပုဒ်လုံးကိုခင်ဗျားလုပ်ခဲ့ဖူးတာကြာပြီ။ တကယ်တော့မွေးဖွားလာတာအမှန်ပါပဲ။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှာခံစားရတယ်။ ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာတစ်ခုခုအတူတူနေဖို့အရေးကြီးတယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်ကိုငါ့ဘဝမှာအမြဲတမ်းတည်ရှိနေသောအရာတစ်ခုအဖြစ်ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အဆက်မပြတ်ပြောရရင်ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ့် mont ဖြုန်းနိုင်ဆိုလိုတာကအာရုံဘယ်လောက်အာရုံပေါ်တွင်မူတည်သည် ပန်ဒါပညာရှင်တွေနဲ့အတူပါ။ umi ပြောတာကအမ်၊ အမ်၊ ငါ Middleokay ဆီကို ဦး တည်နေတယ်။ မင်းအဲဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီလား၊dနှစ်တွေမင်းကြိုးစားခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီနှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီ၊ မင်းစာရေးဆရာဖြစ်ခဲ့တာသိတာကအထက်တန်းကျောင်းတက်ရတာနဲ့တူတယ်ငါကအမြဲတမ်းလုပ်နေသလိုပဲ အိမ်မှုကိစ္စတစ်ခုတည်းသောပြproblemနာကသင်မလုပ်နိုင်သောနေ့မတိုင်မီညတွင်၎င်းကိုမလုပ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်ကြိုးစား။ နှစ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့သည် ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သမျှမှာကျွန်ုပ်၌အလုပ်ခွင်အလေ့အထများရှိသည်ဟုဆိုသည်။ မင်းကိုငါအရွယ်ရောက်ပြီးသူစာအုပ်တွေမဟုတ်ဘဲအရွယ်ရောက်ပြီးသူစာအုပ်တွေမဟုတ်ဘဲအရွယ်ရောက်ပြီးသူစာအုပ်တွေရေးတာ၊ ကလေးစာအုပ်တွေရေးတာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကလေးဖြစ်လို့ပိုလွယ်တယ်လို့သူတို့ထင်တယ်၊ သူတို့ကစကားလုံးနည်းတယ်အဆင်ပြေတယ်။ တစ်ခုလုံးရှုပ်ထွေးမှုနည်းတယ်၊ ရုပ်မြင်သံကြားတွေနေရာယူလာပြီးရုပ်မြင်သံကြားပြကွက်တွေသွားတဲ့အခါဘာဖြစ်သွားသလဲ၊ ကလေးစာအုပ်တွေရေးဖို့ပိုလွယ်တယ်၊ ကလေးစာအုပ်စာရေးဆရာတွေကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်ပါ၊ အခုသူတို့ဆီကစာတွေရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်သင်ကသူတို့ကိုစော်ကားတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းကအဲဒီမှာနောက်ဆုံးအကြိမ်ရှပ်အင်္ကျီသေတ္တာပေါ်မှာကော်နီရေးတာ။ မင်းကြိုက်တဲ့ရဲကိုမင်းသဘောကျတယ်ဆိုတာမင်းသဘောကျတယ်၊ မင်းပတ် ၀ န်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုမကြိုက်ဘူး၊ ငါ့အိမ်မှာတကယ်မကြိုက်ဘူး၊ အိမ်မှာအိမ်ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ မှန်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါအိမ်မှာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ ဘယ်သူ့ကိုမှမရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါမှန်ပါတယ်။ ငါကဒါကို fran land လို့ခေါ်တယ်။ fran land လို့ခေါ်တယ်။ တခြားသူတွေအတွက်နေရာမရှိဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေဟာ rooms ည့်ခန်းတွေမဟုတ်ဘဲသူတို့တွေဟာအပြင်ကထွက်ဖို့နေရာတစ်ခုအဖြစ်နားလည်မှုလွဲတဲ့အခါ guest ည့်ခန်းတွေကိုဖြိုဖျက်ဖို့အရမ်းအစွန်းရောက်တဲ့ other ည့်ခန်းတွေထက်တခြားသူတွေကိုစဉ်းစားချင်လို့ပါ။ နယူးယောက်နှင့် like ည့်ခန်းရှိတယ်။ မင်းမှာ room ည့်သည်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်။ ဟုတ်တယ်နင်နဲ့မတူဘူးဝေးလံခေါင်သီတဲ့နေရာတစ်ခုငါသိတယ်။ နယူးယောက်ကိုရောက်ရင်လူတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောပြနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါနင့်ကိုနယူးယောက်မှာနေရင်မင်းကငါနဲ့အတူနေနိုင်တယ် ကျွန်တော့်မိဘတွေကဂျာစီအသစ်မှာနေတုန်းကျွန်တော့်အမေကကျွန်တော်နဲ့အတူနေခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့မိသားစုအတွက်ဖြစ်စေအထူးသဖြင့်မိသားစုကိုပါအကျုံးဝင်သည်။ တစ်ညတည်းနေပေမယ့်အဲဒီအချိန်တုန်းကအမေကဆန့်ကျင်ခဲ့တယ် သူကကျွန်တော့်အမေလို့သိတယ်။ မင်းမှာသိတဲ့လမ်းကြောင်းကနေ ၁၀၁ ခုပဲရှိတယ်။ လူတွေကပြောချင်တယ်၊ မင်းကမင်းရဲ့အမေပဲ၊ မင်းကဒီမှာပဲနေလို့ရမယ် , ဒါကြောင့်ငါ့အမေအဲဒီမှာနေလို့ကောင်းတယ်။ မင်းအခန်းတစ်ခန်းတည်းအတူတူနေလို့ရပြီ။ အဆင်ပြေတယ်။ ဆိုဖာပေါ်မှာအိပ်ခဲ့တယ်။ အဆင်ပြေသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါ့မေမေသွားလမ်းပေါ်မှာလျှောက်သွားရင်ဘာလုပ်မှာလဲ။ ဘဝမှာမင်းကလူတွေနဲ့အဆင်ပြေသလား။ မင်းဟာမင်းရဲ့တိုက်ခန်းအပြင်ဘက်မှာရှိနေချိန်မှာမင်းဟာလူတွေကိုတွေ့ရတာအရမ်းပျော်တယ်၊ မဟုတ်ဘူး၊ ငါသူတို့ကိုတွေ့ရတာလုံးဝမပျော်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းတာကသူတို့ကိုသင်မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူး၊ သူတို့ကမင်းကိုသိတယ်လို့သူတို့ထင်ကြပေမဲ့၊ သူတို့ကဒီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအားလုံးကိုလုပ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါသူတို့ကိုလျစ်လျူရှုတယ်။ ကောင်းပြီ၊ ခင်ဗျားအရမ်းပူနွေးပြီးမှုန်ဝါးလာတယ်။ ငါ့ရဲ့ဆံပင်အပြောင်းအလဲကငါ့အတွက်ကောင်းတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ wespeaki ကဒီနေရာတစ်ခုလုံးကအရမ်းခြိမ်းခြောက်နေတာပဲ။ နည်းနည်းလေးတော့ကြောက်တယ်ငါ့မှာမရှိတာငါနည်းပညာဆိုင်ရာဝေါဟာရကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နည်းပညာကိုကြောက်တာပဲ၊ ဒါမှမဟုတ်နည်းပညာကိုသင်မနှစ်သက်တဲ့နည်းပညာကိုမင်းတို့မယုံဘူး။ ငါနည်းပညာကိုဆန့်ကျင်တာလို့ပြောရင်ကောင်းမယ်မထင်ပါဘူး ဒါကကြောက်ရွံ့ခြင်းရဲ့အခြားတစ်ဖက်ပဲ။ ငါဆိုလိုတာကငါ့ရဲ့ကလေးဘဝကိုတီထွင်ခဲ့ရင်ငါအရာရာတိုင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမသိဘူး။ အကယ်၍ ကုလားထိုင်တစ်လုံးလိုသင်ကိုင်တွယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းကကလေးဘဝကိုတီထွင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုလုပ်နိုင်တယ်။ ငါကဒါနဲ့အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါမှာခေတ်သစ်အရာကောင်းတွေလည်းမရှိဘူး မင်းအကြောင်း မင်းဟာစာရေးဆရာတစ်ယောက်၊ word processor ဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာအလုပ်လုပ်သလား။ ဘောပင်တစ်ချောင်းဖြင့်ရေးပါအဆင်မပြေသော်လည်းဘောပင်တစ်ချောင်းကဲ့သို့ကောင်းသည့်ဘောပင်ကဲ့သို့ပင်နားမကြားသောအပင်ဖြင့်စာရေးခြင်း bicclick ဟုခေါ်သည်ရှေးဟောင်းပုံစံဖြစ်သောဘောပင်ဘောပင်ဖြစ်သည်၊ သူတို့ရှာဖွေရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်ရှိသည် တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်အားအဆင်ပြေစေလိုပါကကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်သင်သိသောအရာများကိုတွန်းအားပေးနေသည်ကိုသင်သိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအယူအဆနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိပြီးသင်ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ထိုခလုတ်ကိုနှိပ်ရန်နှင့်အချက်သည်မှန်ကန်စွာထွက်ပေါ်လာသည်။ သင်တစ်ခါတစ်ရံလှည့်ရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းတို့သည်အလွန်ရှုပ်ထွေးလွန်းသောပိုမိုခေတ်မီသောခြံများနှင့်ဆန့်ကျင်သည်။ ဒါကြောင့်မင်းရေးဖို့ထိုင်ပြီးမင်းပတ်ပတ်လည်မှာလည်နေတဲ့ဘောပင်တစ်ချောင်းရှိရင်မင်းရဲ့ဗလာခန်းကနေထွက်ပြီးထွက်ပြေးမှာပါ၊ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မရေးဖို့အကြောင်းပြချက်ကောင်းတစ်ခု၊ သင်အဆုံးသတ်တော့မှာလား။ ငါထင်တာကမေးခွန်းကောင်း၊ ဒါကဘယ်ကိုသွားလဲ၊ နည်းပညာကငါတို့ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးနေမယ်ဆိုရင်ငါကပိုပိုပြီးစိုစွတ်နေတဲ့အရာတွေကိုရှောင်ရှားဖို့ပိုပိုပြီးခက်ခဲလာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်။ ople ကငါတို့ရဲ့အင်တာနက်ကိုကွန်ပြူတာများဖြင့်သုံးပြီး၎င်းသည်ဘဝ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
သင်သည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်သို့ထွက်ပြေးရမည်မဟုတ်၊ ဂရင်းလန်းတွင်နေထိုင်ပါသို့မဟုတ်သင်၏ကြီးမားသောသရုပ်သကန်နှင့်အတူတစ်ခုခုသို့မဟုတ်၎င်းအားခေါ်ဝေါ်သမျှနှင့်၎င်းတို့သည်ထိုနေရာတွင်ပန်ဒါအဖြစ်ရှိမည်လော။ ငါကလမ်းပေါ်မှာမင်းကိုရောင်းလိမ့်မယ်၊ ငါဆိုလိုတာက၊ သူတို့တီထွင်တာများလေ၊ ငါသိလေလေ၊ တခြားသူတွေနဲ့ငါတူညီမှုနည်းပြီး guests ည့်သည်တွေဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ ဒါဟာကောင်းတဲ့သီအိုရီပဲ၊ အရာအားလုံးကိုငါချစ်တယ်။ မင်းရဲ့အတွေးအခေါ်ကိုငါတို့နဲ့အတူမျှဝေပေးတဲ့အတွက် uh branleibowitz ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စာအုပ်က mr chaz ဖြစ်ပြီး lisasue ကအခုအိတ်ကပ်စာအုပ်ထဲမှာရှိနေပေမယ့်ပစ္စည်းပစ္စယမဝယ်တော့ဘူးတဲ့ pandas တွေကိုတွေ့နိုင်တယ်။ မှန်မှန်ကန်တဲ့ပန်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်မှာကလေးတွေပီဇာမ ၀ ယ်ကြဘူးလို့သတိပေးသင့်တယ်။
Fran Lebowitz ရဲ့အလုပ်အကိုင်ကဘာလဲ။
- နောက်လာမည့် guest ည့်သည်သည်အရောင်းစာရေးဆရာနှင့်ဟောပြောသူဖြစ်သည်။ သူမသည် Netflix မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အသစ်“ Pretend It'saCity” တွင်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူနှင့်မင်းသမီးအဖြစ်ပါ ၀ င်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးပြသခြင်းကို Fran Lebowitz ။
မင်္ဂလာပါ၊ ဖရန်။ နေကောင်းလား? - ငါကတခြားသူတွေနဲ့တူတယ်။ နေကောင်းလား? - ငါတော်တော်ကောင်းကောင်းလုပ်နေတယ်။
ငါအရမ်းချစ်တယ် ဒါဟာငါလိုချင်တဲ့အတိအကျပါ။ ၎င်းသည်နယူးယောက်အကြောင်းအံ့သြဖွယ်ပြပွဲဖြစ်သည်။
မင်းငါ့ကိုပြောပြနိုင်လားမင်းကြည့်ရတာကြိုက်လား။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကင်မရာနဲ့ကြည့်ချင်ပါသလား။ - မဟုတ်ဘူး၊ ငါမုန်းတယ် ငါတကယ်ကိုမုန်းတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကင်မရာတောင်မမြင်ချင်ဘူး။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့အသက်အရွယ်ကသူတို့ကိုယ်သူတို့မကြည့်ချင်ဘူးဆိုတာမင်းသိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတစ်ခါမှမကြည့်ခဲ့ဖူးဘူး။ တီဗွီမှာကျွန်တော်တစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး
ငါမလုပ်နိုင်ဘူး၊ ငါဘယ်တော့မှယူမှာမဟုတ်ဘူး။ သင်သိသည် - မာတင်စကောဆီသည်ညွှန်ကြားခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်တည်းဖြတ်ရန်မာတီသည်ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာခဲ့သည်။ သူကအရာရာတိုင်းကိုအကြိမ် ၄၀၀၀ လုပ်တယ်။
ဒါကြောင့်ငါကဒီအကြိမ်ပေါင်းများစွာမြင်ဖူး, သင်သိ, ကံကောင်းတာကငါပင်မှတ်မိကြဘူး။ - သင်လုံးဝတွန့်ဆုတ်ခဲ့သလား မင်းမာတီနဲ့အရင်လုပ်ခဲ့ဖူးတာငါသိတယ် သူတောင်းပန်သောအခါသင်တွန့်ဆုတ်ခဲ့သလား - ဟုတ်ကဲ့၊ ငါဆိုလိုတာကသူပြောခဲ့တဲ့အကြောင်း - လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကမာတီက“ Public Speaking” လို့ငါ့အကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။
သူသည်ထွက်လာသောအခါ၊ ငါက၊ မဟုတ်ပါ၊ 'ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲ?' ငါပြောတာက“ ကောင်းပြီ၊ မင်းသိလား၊ တစ်ယောက်ယောက်ကလူတစ်ယောက်အကြောင်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်နှစ်ခုရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင်အဲဒီလူကဂျော့ဝါရှင်တန်မဟုတ်ခဲ့ရင်ငါမျက်စိကိုလှိမ့်လိုက်မယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်မမျက်စိမမြင်ချင်ဘူး
ဒါနဲ့ငါမဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်အတွင်းမှာသူ၌ကွဲပြားခြားနားသောအတွေးအခေါ်များရှိခဲ့ပြီး၎င်းနောက်သူသည်ထိုစိတ်ကူးကိုရရှိခဲ့သည်။ ပြီးတော့ငါတို့လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကဒီလိုလုပ်ခဲ့တာမင်းသိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်က၊ ဒါပေမယ့်မင်းတို့မြင်တဲ့အခါမင်းမြင်ခဲ့ပြီးပြီ၊ တချို့က COVID-19 မတိုင်မီကရိုက်ကူးခဲ့တာကိုသင်မြင်နိုင်ခဲ့တယ်၊ -... မြို့, သင်သိ, လူအပြည့်အဝ။ - လူတွေပြည့်နေတယ်။
မင်းပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်သွားပြီမျက်နှာဖုံးမပါဘဲမင်းကိုတွေ့ရမယ် သင် - သင်သည်မျက်နှာဖုံးများခေတ်ကုန်ဆုံးသောအခါပျော်ရွှင်လိမ့်မည်လော။ - ဟုတ်တယ်။ မလုပ်တဲ့သူရှိလား။ - မှန်ကန်သော။ ငါဆိုလိုတာကငါနောင်တရမယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါဘာကြောင့်ဘဏ်တွေကိုလုယူတာလဲ။ ဘာကြောင့်လဲ - ဘာကြောင့်လဲ - ဘာကြောင့်လူတိုင်းကိုလုယက်တာလဲ။ ? သူတို့ကသူမမျက်နှာဖုံးကိုဝတ်ထားတယ်။
သွားရှာတွေ့လား ငါမထင်ဘူး၊ ငါရာဇ ၀ တ်မှုတွေများလာပြီဆိုတော့ဘဏ်လုယက်မှုတွေလို့ငါမထင်ဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်၊ လူတိုင်းဟာမျက်နှာဖုံးစွပ်တွေ ၀ တ်တာကိုမုန်းတယ်။ ဒါကြောင့်မို့သူတို့မျက်နှာဖုံးများကိုဝတ်ဆင်သူတွေကဒေါသမထွက်တတ်သူတွေကိုဒေါသထွက်ကြတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်လမ်းပေါ်မှာလျှောက်လာတဲ့အခါသူတို့ကိုကြည့်ပြီးသူတို့ကမင်းကိုကြည့်ပြီး 'မင်းကမင်းကိုမဝတ်လို့ဘာကြောင့်မဝတ်တာလဲ။ ကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါက ၀ တ်ရတာကိုကြိုက်လား? ' --သင်သိလား? ဒီတော့ - ကောင်းပြီသင်တန်းငါကမုန်း၏။ -“ Pretend It'saCity” စီးရီးခေါင်းစဉ်သည်နယူးယောက်သို့လာမည့်သူများအားသင်အကြံပေးလိမ့်မည်။
မင်းလုပ်နိုင်လားမင်းငါတို့ကိုဒီလောက်မြန်မြန်စကားပြောလို့ရမလား။ ? - အင်း၊ ငါဆိုလိုတာက၊ ဒါကလာ - နယူးယောက်မှာနေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်နယူးယောက်ဟာမျက်နှာကျက်ကိုဗိုင်းရပ်စ်အထိထိုးနှောက်ထားတာကိုသတိပြုမိလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားသိပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသူတို့သိတဲ့အတိုင်း၊ သူတို့ကနယူးယောက်မှာ ၈.၅ သန်းသာရှိတဲ့မြို့မှာကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ၅၈ သန်းရှိတယ်ဆိုတာကိုဂုဏ်ယူစွာကြေငြာခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အလေ့အထကိုတီထွင်ခဲ့တယ်၊ နှစ်စက္ကန့်တိုင်းမှာလမ်းဘေးအလယ်မှာရပ်နေတဲ့ခရီးသွား into ည့်သည်တွေကြုံလာတဲ့အခါငါဖြတ်သွားဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါသူတို့က 'ရွေ့လျားပါ! ၎င်းသည်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်ဟုယူဆပါ။ '- - အခုတော့ဟုတ်ပြီ၊ ထွက်လာတော့မယ်၊ အဲဒါကိုမြင်တဲ့လူတွေ၊ ခင်ဗျားသိချင်တယ်။ အခုခေါင်းစဉ်နဲ့ပေါ့။ တစ်ယောက်က' ငါအဲဒီခေါင်းစဉ်ကိုကြိုက်တယ်။ ဒါအရမ်းကဗျာဆန်ဆန်ပဲ။ မင်းသိတယ်၊ ဒါကဖမ်းယူတယ်။ ” ငါတကယ်ပြောတယ်၊ ငါဟာအထူးသဖြင့်ကဗျာဆန်တာ၊ တစ်ခါမှမစချင်ဘူး။
ထိုအ - ဒါပေမယ့်၏သင်တန်းအခြေအနေတွင်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ငါဆိုလိုတာကငါကချစ်တယ်လို့တစ်စုံတစ်ယောက်ကပြောခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်နယူးယောက်သို့ချစ်သောမေတ္တာဖြစ်သည်။ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ နယူးယောက်ကိုရေးတဲ့စာလား။ ငါဆိုလိုတာကဗိုင်းရပ်စ်မတိုင်ခင်ငါနယူးယောက်အကြောင်းတိုင်ကြားခဲ့တယ်၊ မင်းကချစ်ခြင်းမေတ္တာပဲ။ ဒါကြောင့်ဒါကို 'မြို့တော်လို့ဟန်ဆောင်' လို့ခေါ်တယ်။ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ထဲမှာမင်းကနယူးယောက်ခ်မှာဘာကြောင့်နေထိုင်နေရတာလဲဆိုတာမေးခွန်းတစ်ခုနဲ့အဖြေရှာနေစဉ်အတွင်းတစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ကိုမေးခဲ့တယ်။
သင်အရမ်းရိုးသားတဲ့အရာတစ်ခု - အခြားနေရာများစွာမှာမင်းကိုအဲဒီနေရာမှာရှိနေစေချင်တယ်လို့မထင်ဘူး၊ ငါဟာတခြားနေရာတွေမှာသာမကတခြားနေရာတွေမှာပါနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့မထင်ဘူး။ ထိုအခါငါကအမြဲတမ်းအမှုဖြစ်ခဲ့သည်ထင်။ ဒါဟာနယူးယောက်စီးတီးမှာနှစ်သစ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။
နင်နယူးယောက်မြို့တော်ဝန်တွေကနယူးယောက်မြို့တော်ဝန်ဖြစ်လာဖို့နဲ့နယူးယောက်မြို့တော်ဝန်ဖြစ်လာဖို့ကောင်းတဲ့ခြေလှမ်းတရပ်လို့မင်းထင်နေသလား၊ Bloomberg လား၊ de Blasio လား၊ ရူဒီတို့လား။ Giuliani? ပြီးတော့ငါဆိုလိုတာက၊ မင်းတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ကျန်တစ်နိုင်ငံကဒီကိုကြည့်ပြီး 'အိုး၊ နယူးယောက်စီးတီးမြို့တော်ဝန်ကိုအရာရာကိုစီမံခိုင်းသင့်တယ်' လို့မင်းထင်တာကိုသင်အံ့သြမိလား။ ငါဆိုလိုတာကနယူးယော့ခ်ကိုတကယ်အံ့အားသင့်စေမှာပါ၊ သမ္မတကောင်းတစ် ဦး တည်းမထားပါနှင့်။ မဟုတ်ပါ၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဟာ Indiana ပြည်နယ် South Bend ရဲ့မြို့တော်ဝန်ကသမ္မတကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်လို့လူအများထင်မြင်တဲ့တိုင်းပြည်မှာနေပါတယ်။ ငါပြောချင်တာက Indiana ပြည်နယ် South Bend ထက်ကျွန်တော့်အဆောက်အ ဦး မှာလူတွေများများနေတယ်။
ဘယ်သူကဒီစိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုလို့ထင်တာလဲ။ ငါထင်တယ် - မဟုတ်ဘူး။ ထို့အပြင်လက်ရှိမြို့တော်ဝန်ဘီလ်ဒီဘလဲစီယိုသည်တိုင်းပြည်အတွင်းတွင်စည်းလုံးမှုအရှိဆုံးနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာလူတိုင်းကသူ့ကိုမုန်းသည်။ မြို့လုံးကကွဲပြားတာမဟုတ်ဘူး။
ဒီမြို့ဟာ de Blasio ကိုမုန်းတီးနေတယ်။ လူတိုင်းသူ့ကိုမုန်းကြသည်။ ချမ်းသာတဲ့လူတွေကသူ့ကိုမုန်းတယ်၊ ဆင်းရဲတဲ့လူတွေကသူ့ကိုမုန်းတယ်၊ လူဖြူတွေ၊ လူမည်းတွေ၊ လူငယ်တွေ၊ လူအားလုံး၊
သူက Dolly Parton နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲ။ လူတိုင်းက Dolly Parton ကိုနှစ်သက်တယ်။ လူတိုင်း Bill de Blasio ကိုမုန်းတယ်။ နှင့်အဘို့ - Dolly Parton ဘီလ်က de Blasio ထက်အများကြီးပိုကောင်းမြို့တော်ဝန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမည်သည့်နယူးယောက်ရဲ့စိတ်ထဲရှိသံသယရှိစရာမလိုပါ။ - သင် - ဤကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးစာတမ်းများတွင်သင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
နယူးယောက်ခ်ကိုစောစောကခင်ဗျားဘယ်တော့မှသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုစောစောစီးစီးအင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့တယ်၊ မင်းတို့ငါတို့တွေလိုပဲများများစားစားမစားရဘူး၊ မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြင်ဆင်တဲ့အစားအစာနဲ့မယုံကြည်မှုရှိတာကဘယ်လောက်စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းလဲလို့ငါတွေးမိတာပေါ့။ သင်တို့အဘို့သခွားသီး၊ ပထမတော့ငါစဉ်းစားခဲ့တယ်၊ ငါဆိုလိုတာကငါစားရတာကိုနှစ်သက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ချက်ပြုတ်ရတာကိုမုန်းတယ်၊ ထိုအခါငါအများအားဖြင့်ထွက်စားကြ၏။ မင်းသိတဲ့အတိုင်းငါဟာငါစားသောက်ဆိုင်ကိုသွားခဲ့တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်လူတွေကသင့်ကိုညစာစားဖို့သူတို့အိမ်ကိုတကယ်ဖိတ်ခဲ့တယ်။ - ညစာစားပွဲတွေသွားတက်ခဲ့ဖူးတယ်။
ဒါနဲ့ငါညစာစားရန်မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ ငါပြောချင်တာက 'အိုး၊ မင်းညစာစားပွဲကိုကြည့်ပါ ဦး' လို့ပြောတယ် ငါကြည်နူးဖွယ်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်အံ့သြဖွယ်ညစာစားပွဲသို့သွားသည်။
အခုမီးဖိုချောင်ကိုငါဘယ်လောက်အထိချဉ်းကပ်လာတယ်ဆိုတာကိုငါမသိနိုင်ဘူး - တကယ်ပဲ။ ပျော်ရွှင်သောစိတ်တွင်ပွင့်လင်းသောနှလုံးခွဲစိတ်ကုသသူများရှိသည်။ - ထိုအခါငါပြု - အစားအစာပြင်ဆင်နေစဉ်ငါအမျက်ထွက်။
ဥပမာအားဖြင့် - ငါနယူးယော့ခ်ျမှာဒီလိုပြောတယ် - ငါဘာကြောင့်ဒီသခွားသီးကိုအခွံချွတ်တာလဲ? မင်းငါသိတဲ့အတိုင်း 'ငါဘယ်သူလဲ - Daniel Boulud?' - -သင်သိလား? 'ဒါအလုပ်ပဲ။ ငါဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်သင့်သလဲ 'ရပါတယ် ငါ့အိမ်ရှိအစားအစာများကသင်မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်နယူးယောက်ရှိအဆိုးဆုံးအစာနှင့်တူသည်။
ဒါဟာ - ငါမသိဘူး၊ ငါဆိုလိုတယ်၊ ငါပြောတာ - လူတွေက 'ကောင်းပြီ၊ ကြက်ဥကြော်ပဲစားလို့မရဘူးလား' ငါကြက်ဥကြော်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်အရမ်းဆိုးလိုက်တာ။ ငါတို့အားလုံးအတွက်စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ညစာစားပွဲတွေမကြာခင်ပြန်လာနိုင်မယ်ဆိုတာငါတို့အားလုံးမျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါဒီကိုကြည့်ရှုရန်အချိန်ကိုသတ်ဖြတ်သူမည်သူမဆိုအားအကြံပေးလိမ့်မည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်နယူးယောက်မြို့မည်မျှကြီးကြောင်းသတိပြုရန်ဖြစ်သည်၊
မင်းရဲ့ပါ ၀ င်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Fran နှင့် Ann Lebowitz တို့သည်ဆက်စပ်မှုရှိပါသလား။
- ပြပွဲသို့ပြန်လာသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းကငါအကြိုက်ဆုံးလူတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ။ ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိနေတာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သငျသညျ Jesse Eisenberg နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည် - ငါဟုတ်ကဲ့ငါသူ့ကိုတွေ့ဆုံခဲ့သည် - ဟုတ်တယ်။ - ကျွန်ုပ်မှာတစ်ခုခုရှိပါသလား။
ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုမင်းလုပ်ခဲ့တာမင်းသိလို့ပဲ။ HBO မှာမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် Martin Scorses ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်အခုသင်ဟာ Martin Scorsese နဲ့ Netflix မှာစီးရီးလုပ်နေတယ်၊ ငါမစောင့်နိုင်တော့ဘူး
ဒါကကြီးမားတဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ခုပါ။ ငါသည်သင်တို့၏နံပါတ်တစ်ပန်ကာဖြစ်၏။ ငါကြည့်မယ်
အဲဒါဘာလဲ - မင်းမှာခေါင်းစဉ်ရှိလား။ မင်းမှာခေါင်းစဉ်ရှိလား။ မင်းမှာခေါင်းစဉ်ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကမင်းမှာမင်းဘွဲ့ရှိလား။ ခေါင်းစဉ်မပြောနဲ့။ ' - ဘာလဲ? - ဒါကြောင့်ငါခေါင်းစဉ်ကိုပြောလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်မသိပါဘူး။ - ဒါစိတ်ဝင်စားစရာပါ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပြပွဲအကြောင်းပြောချင်ပြီးပြပွဲအကြောင်းမပြောနိုင်လို့ပါ။ - မင်းရဲ့နာမည်ကပြပွဲမှာလား။ - မဟုတ်ဘူး။ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ပြောနိုင်သောကြောင့် - မင်းရဲ့နာမည်ကပြပွဲမှာနာမည်ကြီးလိမ့်မယ်ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘူး။ - ကောင်းပြီ၊ ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမိသည်။ အဲဒါဘာလဲဆိုတာငါသိတယ်။ On-No ဆိုတာဘယ်အချိန်လဲလို့ပြောလို့ရမလား။
ဘယ်အချိန်လေမလဲမသိဘူး မဟုတ်ပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲလို့မေးစရာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ကိုခွင့်မပြုခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပါ။ ဒါအရူးပဲ ထုတ်လွှင့်တော့မယ့်အချိန်ကိုငါမပြောနိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်မပြီးသေးဘူး။ -Oh. -ဒီတော့ဒါကပြီးသွားရင်လေဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုအဆုံးသတ်ဖို့ကျွန်တော်မဆုံးဖြတ်ဘူး။ - မဟုတ်ဘူး။ - မာတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ။ - မာတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ။ - ဟုတ်တယ် - မင်းကသူငယ်ချင်းတွေပါ
ပြီးတော့သူအတူတူလာပြီး 'ဟေး၊ စီးရီးတစ်ခုလုပ်ကြရအောင်' လို့ပြောတယ်။ ပြီးတော့အဲဒါဟာအတိအကျဘာအပေါ်မှာအခြေခံသလဲ - အဲဒါက - ဒါဟာအခြေခံအားဖြင့်နယူးယောက်အကြောင်းပါ။ - ဟုတ်တယ်။ - ဒါဆိုမာတီနဲ့အများကြီးစကားပြောနေသလား။ ငါ့ကို
ငါနဲ့အင်တာဗျူး နယူးယောက်အကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သူကနယူးယောက်မှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတော်တော်များများကိုကျွန်တော့်ကိုအင်တာဗျူးခဲ့တယ်။
ပြီးတော့သူကမင်းရဲ့သီအိုရီ၊ အရာရာအပေါ်ထားရှိတဲ့သင့်ရဲ့သဘောထားကိုသိချင်တယ်။ - ဟုတ်တယ်။ ကောင်းပြီ, 'ယူ' 'ကချပြီး၏တလမ်းတည်း။
ပြီးတော့ - အဲဒါကိုဖော်ပြဖို့အခြားနည်းလမ်းများရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဟုတ်ပါတယ် - ပြီးတော့ငါနယူးယောက်မြို့မှာရှိနေပြီးအရာရာကိုသတိထားမိတယ်။ - နေကောင်းလား? နှင့် Martin Scorsese တို့သည်နယူးယောက်မြို့ကိုလှည့်ပတ်။ လမ်းလျှောက်နေကြသည်။ မဟုတ်ပါ။ မာတီကငါနဲ့အတူမသွားဘူး
သူလိုချင်တယ် - သူကအဲဒါကိုမကောင်းတဲ့အကြံတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်။ - ဒါဆိုသူကမင်းကိုဝေးတဲ့ကားကနေပို့နေတာလား။ - ဟုတ်ကဲ့ - ဘယ်လိုလဲ? ငါသံသယရှိခဲ့တာလား ဒါအံ့သြစရာပဲ! ဒါအံ့သြစရာပါ။
ငါမစောင့်နိုင်တော့ဘူး ဒါကြောင့်ငါမသိ - ခေါင်းစဉ်မသိဘူး။ ဘယ်အချိန်မှာထွက်လာမယ်ဆိုတာမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကြည့်ဖို့မစောင့်နိုင်တော့ဘူး။
ဒါကလျှို့ဝှက်ချက်ပါ။ ဒါဟာတကယ့်တကယ့်အမှန်တရားပါ၊ နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ၏။ ပျော်စရာပါ
အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏အကြံအစည်ကိုငါကြားလိုသည်။ နောက်ကွယ်ကနေမင်းနဲ့စကားပြောခဲ့ပြီးမင်းကမြေအောက်ရထားပေါ်ကထွက်လာပြီလို့မင်းကိုပြောခဲ့တယ်၊ ဒါကလင်ကွန်းစင်တာလား။ - ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါကဒီအမည်မသိပြသမှုအကြောင်းပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဟာတစ်ချိန်လုံးလမ်းလျှောက်နေပြီးအရာတွေကိုအမြဲသတိပြုမိခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင်တခြားသူတွေလည်းအရာရာကိုသတိပြုမိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ မှလွဲ၍ ငါသာလူတစ်ယောက်ကိုဖုန်းလာတယ်။ အခုလူတိုင်းကဖုန်းကိုကြည့်ကြည့်ပြီးသူတို့တစ်တွေမြို့ထဲကိုအမွေဆက်ခံလိုက်တယ်။
သူတို့ကအခြေခံအားဖြင့် 'ဖရန်၊ မင်းသိပါတယ်။ '- မင်းကဒီမြို့မှာတစ်ယောက်တည်းသတိထားပြီးမင်းရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းကိုမကြည့်တဲ့သူပဲ။ - မင်းမှတ်မိနိုင်အောင်
ဒါနဲ့ငါလင်ကွန်းစင်တာကိုသွားချင်တဲ့မြေအောက်ရထားပေါ်ကဆင်းလာတယ်။ ငါလင်ကွန်းစင်တာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဘက်မှာ - မှားယွင်းတဲ့ဘက်မှာထွက်လာ၏။ 67 လမ်းနှင့် Broadway ။ - ဟုတ်ကဲ့လိုပဲ။ မီးအလင်းပြောင်းဖို့ငါစောင့်နေတုန်း၊ ငါလုပ်တဲ့အရာတခုကတော့ဒီကျွန်းပေါ်ကယာဉ်အသွားအလာကျွန်းဖြစ်တာမို့မြို့ထဲမှာကုလားထိုင်တွေနဲ့စားပွဲအနည်းငယ်ရှိတယ်။ - ဒါမရိုးရှင်းဘူး။
စားပွဲတစ်လုံးနှင့်ထိုင်ခုံတစ်ခုရှိသည်။ - Middle of Broadway သူစလုပ်တဲ့အချိန်မှာနယူးယောက်ကလူတွေက 'ဘယ်သူမှအဲ့ဒီမှာထိုင်မနေဘူး' လိုပဲကျွန်မတို့မှားတယ်။ - စိတ်ကူးကြည့်လို့ရလား လူတွေအဲဒီမှာထိုင်နေကြတယ်။
ဒါဟာလူကြိုက်များတဲ့အရာပါ။ -ငါသိတယ်။ ဒီတော့အဲဒီမှာထိုင်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်။
စားပွဲငယ်လေးများနှင့်ကုလားထိုင်ငယ်လေးများလည်းရှိသည်။ လူတွေကအဲဒီမှာထိုင်ပြီးဖုန်းတွေကြည့်ကြတယ်။ ပြီးတော့ငါလှည့်, ငါနိမိတ်လက္ခဏာရှိကွောငျးသတိထားမိ။
ထိုအနိမိတ်လက္ခဏာကို Richard Tucker ပန်းခြံကပြောပါတယ်။ ကောင်းပြီ၊ ရစ်ချတ်တာကာသည်အော်ပရာအဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်းသင်သိသည်။ -Duh, ဟုတ်တယ်, မင်္ဂလာပါ! ဒစ်ခ် Tucker? ဟုတ်တယ်၊
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဲဒါကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် - လင်ကွန်းစင်တာကိုမင်းလမ်းပေါ်ရောက်နေပြီဆိုတာသတိထားမိတယ်။ - ဟုတ်တယ် - ပြီးတော့ငါစဉ်းစားမိတယ် 'ကောင်းပြီ၊ ဒါကပန်းခြံမဟုတ်ဘူး။
ကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်တယ်။ 'ဒီစားပွဲခုံလောက်ကြီးတယ်။ တစ်ခုလုံး။ ရစ်ချတ်တာကာပန်းခြံဖြစ်သည်။
ဒါကပန်းခြံတစ်ခုလုံးပါပဲ။ - သေချာတာပေါ့။ အဲဒါကောင်းပါတယ်။ စားပွဲနှင့်ထိုင်ခုံနှစ်စုံနှင့်အတူ - မင်းအော်ပရာကိုသွားပါမယ်။ ဆိုင်းဘုတ်မှာစည်းကမ်းတွေရှိတယ်။ - ဟုတ်တယ်
ပန်းခြံ၏စည်းကမ်းများ။ ဒါနဲ့ငါပန်းခြံ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုကြည့်ပါ။ ဒီတော့ပထမဆုံးသင်တန်းကဆေးလိပ်မသောက်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်သူကဒီရှုပ်ထွေးတဲ့လေကိုရှစ်လမ်းကြားအလယ်မှာထားချင်လဲ။ ရှစ်လမ်းသွားများမှလေ။
ဟုတ်တယ်၊ - သင်သိ, ဘတ်စ်ကား, ထရပ်ကား, ကားများ။ ဒါဘာမှမဟုတ်ပါဘူး
ဆေးလိပ်မသောက်ရ။ ငါကပြောလိမ့်မယ်သိတယ်။ အမိန့်အတိအကျကိုကျွန်တော်မမှတ်မိပါ။ အခြားသူအားလုံးကိုမမှတ်မိပါ။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သည် 'No Grilling' ရရှိပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ရပ်တန့်သွားခြင်းကြောင့်သင်ထိုတွင် grill မရနိုင်ပါ။ လင်ကွန်းစင်တာအပြင်ဘက်၌ကင်ခြင်းများစွာရှိသည်ဟုသူတို့ထင်ကြသည်။ - ကောင်းပြီမဟုတ်တော့ဘူး၊ ဒါကအခုဥပဒေနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်။ - ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ် --- မင်းမှာဟီဘီချိကိုခိုးသွင်းနိုင်တယ်။
ဒါကြောင့်ခွေးကောင်တွေအနည်းငယ်မပါဘဲအော်ပရာကိုသွားဖို့စဉ်းစားခဲ့ပုံမရတဲ့လူတွေအားလုံးလမ်းလျှောက်ကြတယ်။ သူတို့ကဒါကိုမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ - သင်မလုပ်နိုင်ပါ။ t ဤသို့သောပြသမှုသည်ပြသမည့်အရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်မဟုတ်ပါလား။ ကထုတ်လွှင့်သို့မဟုတ်မသည့်အခါဒါဟာအားလုံးပြီးနောက်လေလိမ့်မယ်။ - ဟုတ်တယ်၊ လေထဲမှာလေ။ -I ဆိုလိုတာကငါဆိုလိမ့်မယ်ထင်တယ် - ဟုတ်တယ်၊ - ဆိုလိုတာကမာတီကအဆုံးသတ်ရမယ်၊ - ဟုတ်တယ် - ပြီးတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာအလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်၊ ငါမင်းကိုချစ်တယ်။ Netflix မရှိလို့ငါဘယ်တော့မှမမြင်ရဘူး၊ မင်းဘာပြောနေတာလဲ။ သင်ဘာကြောင့်ငြင်းဆန်ရသနည်း။ တယ်လီဖုန်းလား မင်းတို့ဘဝမှာဒီပစ္စည်းတွေကိုမလိုချင်ဘူး - ငါမဟုတ်။ - သင်မလိုချင်ဘူးလား - မဟုတ်ဘူး။ - ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့အလှည့်ပဲ။ ငါဆိုလိုတာကဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မပျော်ဘူးလား၊ မင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂရုစိုက်မလား။ - ဒါကမယားရေးတာမဟုတ်ဘူး။ -Alright.- တကယ်တော့မဟုတ်ဘူး။ မဟုတ်ဘူး၊ ငါကိုယ်တိုင်မကြည့်ဘူး
ဒါပေမဲ့မင်းသိတာပေါ့၊ ငါရရှိနိုင်ကြောင်းသိလို - သင်နိုင်မည်နည်း -Sure ။ ငါလုပ်နိုင်တယ်၊ ဟုတ်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ငါရတယ်။ အဲဒါကငါတို့နဲ့ကွာခြားချက်တစ်ခုပါ။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ငါတို့အတိအကျအတူတူပါပဲ။ - ငါပြောမယ်၊ ဟုတ်တယ်ငါမှန်ရတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကြိုက်တယ်၊ ငါမကြိုက်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ငါကြိုက်ပါတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကြည့်ပေမယ့်မင်းကိုကြည့်ရတာကြိုက်တယ်
ဒီတော့ --- နှင့်သင်၌ Netflix ကရှိသည်။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုစောင့်ကြည့်နိုင် - ဒါပေမယ့်ငါမူကားသင်ယခုစောင့်ကြည့် - အိုကေ။ ဒါကြောင့်လုံလောက်မယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုမကြည့်ပါနဲ့
ကောင်းပြီ၊ ငါနင့်ကိုမကြည့်တော့ဘဲအနာဂတ်မှာမင်းကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်။ Fran Lebowitz, ဒီမှာရှိနေတာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Franz Lebowitz!
Fran Lebowitz ကဘုရားသခင်ကိုယုံပါသလား။
Fran Lebowitz ရဲ့ရည်းစားကဘယ်သူလဲ။
Franသူမသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအမြဲတမ်းစွဲမှတ်ထားသည့်အများပြည်သူဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ များစွာသောသူတို့သည်သူမကို ၂၁ ရာစုဒေါ်ရသီပါကာနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသည်။၉ ။ 2021 ။
Fran Lebowitz ကဇနီးလား
LebowitzRepublic World မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းသူမမှာအိမ်ထောင်မရှိဘူးဆိုတာသိသာပြီးဆိုလိုတာကသူမမှာမရှိပါဘူးဇနီး။ သူမသည်သို့သော်များစွာသောမိတ်ဖက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမ၏အင်တာဗျူးအချို့တွင်သူမကစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောရည်းစားဖြစ်သော်လည်းကောင်းမွန်သောသမီးနှင့်သူငယ်ချင်းဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ဘာကြောင့် Fran Lebowitz ကိုအထက်တန်းကျောင်းကနေနှင်ထုတ်ခဲ့တာလဲ။
ငါဟုတ်တယ်သဒ်ဒါထဲမှာအတန်းအစားထဲကပစ်ချကျောင်းငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြောင့်ငါဟုတ်တယ်James Thurber ကိုဖတ်နေစဉ်သင်မရယ်နိုင်တော့ပါ။21.09.2018
Fran Lebowitz ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ
Fran LebowitzNetတန်ဖိုးရှိ:Fran Lebowitzသူသည်အမေရိကန်စာရေးဆရာနှင့်အများသုံးစကားပြောသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်တန်ဖိုးရှိ$4သန်း၏။Fran Lebowitz၁၉၅၀ အောက်တိုဘာတွင်နယူးဂျာစီရှိ Morristown တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။Franအထက်တန်းကျောင်းမှထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရသော်လည်းသူမ၏ GED ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
Fran Lebowitz ကမှန်လား
သူမသည် '' ၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များက New York မြင်ကွင်းတွင်ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်၊Franပွင့်လင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။ နယူးယောက်ကိုလာတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကမင်းကလိင်တူချစ်သူဖြစ်ရင်မင်းကလိင်တူချစ်သူတွေကြောင့်ပဲ” ဟု Pretend It'saCity မှမာတင်ကိုပြောပြခဲ့သည်။ “ အခုဆိုရင်သင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုလိင်တူချစ်သူဖြစ်နိုင်တယ်။
Fran Lebowitz ဟာ Vanity Fair အတွက်ဘယ်အချိန်မှာစာရေးစပြုခဲ့တာလဲ။
Vanity Fair ကို ၁၉၉၇ ဖေဖော်ဝါရီလမှာတည်းဖြတ်သူအဖြစ် ၀ င်ရောက်ပြီးကတည်းက Fran Lebowitz ဟာသူမရဲ့ဒဏ္wာရီဆန်ဆန်စူးစမ်းလေ့လာမှုစွမ်းရည်ကိုလူမျိုး၊ ငွေကြေး၊ Lebowitz သည်နယူးယောက်စာပေမြင်ကွင်းကို ၁၉၇၀ အစောပိုင်းတွင်ရိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးအင်တာဗျူးအတွက်ကော်လံရေးရန် Andy Warhol ကသူမကိုငှားရမ်းခဲ့သည်။
Fran Lebowitz သည်သူမ၏ Progress စာအုပ်ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ရေးသားခဲ့သနည်း။
Lebowitz ၏စာအုပ် Progress ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် Vanity Fair တွင်ကောက်နှုတ်ခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၉ တွင်ပြီးစီးရန်မရှိသေးပါ။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှစ၍ Lebowitz သည် Vanity Fair အတွက်ရံဖန်ရံခါဆောင်းပါးရှင်အဖြစ်ပံ့ပိုးပေးသောအယ်ဒီတာအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူသည်စတီဗင်ဘာကလေအေဂျင်စီမှကိုယ်စားပြုလူသိရှင်ကြားဟောပြောသူအဖြစ်တက်သည်။
Fran Lebowitz ကဘယ်သူလဲ၊ သူမဘာကိုလူသိများသလဲ။
Fran Lebowitz ။ Frances Ann 'Fran' Lebowitz (၁၉၅၀၊ အောက်တိုဘာ ၂၇ တွင်မွေးဖွားသည်) သည်အမေရိကန်စာရေးဆရာ၊ ပြည်သူ့ဟောပြောသူနှင့်ရံဖန်ရံခါသရုပ်ဆောင်သူဖြစ်သည်။ Lebowitz သည်သူမအားနယူးယောက်စီးတီး၏အာရုံခံစားမှုများမှတဆင့်စစ်ထုတ်သည့်အနေဖြင့်အမေရိကန်ဘဝနှင့်ပတ်သက်သောသူမ၏လူမှုရေးဝေဖန်ချက်များကိုလူသိများသည်။ ဝေဖန်သုံးသပ်သူအချို့ကသူမကိုမျက်မှောက်ခေတ်ဒေါ်ရသီက Parker ဟုခေါ်ကြသည်။